Da’da howlgabka lagu galo oo kor loo qaadey sida fikir lagu soo bandhigey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Da'da howl-gabka oo kor loo qaadey illaa 69-jir
Da’da howlgabka lagu galo oo kor loo qaadey sida fikir lagu soo bandhigey
Waxaa xoogga la isugu geeyey sidii karti loogu yeelan lahaa
La daabacay tisdag 9 april 2013 kl 13.37
Mustaqbalka ayaa lagu talo jiraa in la qaato mabda'a ah in da'da howl-gabka shakhsiga lagu saleeyo waxa loogu magac-darey "da'da qaniga" iyada oo mar walba la eegeyo inta sannadood ee bulshada ama shakhsigu noolaan karo. Waa fikir maanta lagu soo ban-dhigay qorshe-fikireed la xiriiray baaritaanka da'da howl-gabka lagu galo oo ey dawladdu soo ban-dhigtey. Ingemar Eriksson, ayaa ah caalinkii ka dambeeyey baaritaankan:
- Waxaan soo jeediney in la qaato fikir loogu magac-darey da'da qaniga ah ee howl-gabka. Waa mid lagu saleeyneyo da'da isku celcelinta oo ey bulsho nooshahay. Waana hab ay dawladdu ugu sheegayso bulshada in haddii uu ruuxu dooneyo inuu helo dhaqaale howl-gab ah ee ku filan uu ku khasbanaaneyo inuu shaqeeyo illaa da' mucayin ah.
Muhiimadda baaritaankan ka dambeeysa ayaa ahayd sidii bulshada looga dhaadhicin in la shaqeeyo muddo ka dheer inta iminka la shaqeeyo, laguna galo da'da howl-gabka muddo ka dheer ee shakhsigu xaq u yeelaneyo inuu shaqeeyn karo. Da'dan loogu magac-darey "da'da qaniga" ayaa la soo jeedineyaa iney hir-gasho sannadka 2019, oo wixii markaa laga bilaabo la gaarsiiyey da'da lagu geli karo howl-gabka guud illaa iyo 63, isla-markaana uu howshiisa halkeeda ka sii wadan karo illaa uu ka gaaro da'da 69.
Baaritaanka ayaa ka kooban qiyaastii 50 qodob oo lagu soo ban-dhigey fikirrada mustaqbalka ee nidaamka howl-gabka, iyadoona xoogga lagu saarey sida karti loogu yeelan doono in la shaqeeyo illaa iyo da'da 69-jir.:
- Baaritaankan kuma saabsana oo keliya xeerarka khuseeya da'da howl-gabka. Waxaase kaloo ka muuqda sidii loogu dhiiri-gelin lahaa sidii bulshada loogu dhiiri-gelin lahaa iney shaqeeyso illaa da'da 69 jirka. Annaga oo soo ban-dhigney qodobbo badan ee saameeya bayada shaqada, aqoon-kororsiga iyo sidii dhaqaale loogu soo jiidan lahaa in howlaha lagu nagaado.
Tusaale ahaan waxaa loo soo jeediyey in xafiiska shaqadu miisaaniyad geliyo sidii ey uga taageeri lahaayeen in dadka da'da ahi shaqada u badaln kari lahaayeen, iney hoos u dhigaan saacadaha ey shaqeeyaan. Qeyb kale ee baaritaanka ka mid ah ayaa ka hadlaysa suuttagalka ah in laga taageero dhanka aqoon-kororsiga, sidii waayeelka loogu sahli lahaa iney helaan tacliin dheeri ah.
Bulsho ahaan waxaa la oran karaa in qorshahani uu dan u yahay dhaqaalaha bulshada, sida uu qabo Ingemar Eriksson. In waayeelku shaqeeyo halkii uu howl-gab ka geli lahaa waa mid bulshada dhaqaale soo gelinaysa:
- Waa howl macaash ballaarani ugu jirto bulshada, xitaa haddii lagu miisaaniyad-gelineyo hoowlahan dhaqaalaha bulshada, waxaa dhanka kale ka soo gelaya bulshada dhaqaale hor leh ee loo isticmaali karo baxnaaninta, caafimaadka iyo qorshooyinka dib u habeeynta, sida uu sheegay Ingemar Eriksson, oo ah baaraha qorshaha da'da howl-gabka ee mustaqbalka.
Da'da howl-gabka lagu galo maanta ma mid hoosaysa baa?